Andro Iraisam-Pirenena ho an’ny Vehivavy: “Mpanjakavavy avokoa ny vehivavy rehetra” · Global Voices teny Malagasy
Andro Iraisam-Pirenena ho an'ny Vehivavy: “Mpanjakavavy avokoa ny vehivavy rehetra”
Voadika ny 11 Marsa 2009 19:23 GMT
Omaly no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, ary nampiasa ny mozika sy ny tononkalo ary ny zava-kanto ireo mpitoraka bilaogy miteny Frantsay hankalazana ny kanto, ny fandresena ary ny tolona tsy an-kiato ho an'ny vehivavy.
Tany Martinika dia nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fandefasana ny sary mihetsik'ilay mpihira Senegale, Ismael Lo, i Imaniyé [Fr]:
Ny soratra ao amin'ny tahirin-tsary mihetsika mirakitra ny hira Fontenay d'Avenir, “manana vahaolana amin'ny herisetra manjaka eto an-tany ny vehivavy ary raha toa ka tsy dia manda loatra ny andron'ny vehivavy izy, dia tsy hahita fa afaka manova zavatra ireo.
Nitoraka bilaogy teny ambony fiaramanidina teo anelanelan'i Bénin sy Frantsa i Antonia Neyrins. Nalefany ny rakin-kiran'i Alicia Keyes, “Superwoman,” (vehivavy mahery):
Mahatsiaro ireo vehivavy rehetra voahosihoxy zo aho amin'ity taona 2009 ity, ho an'ireo rehetra voatery mitolona hiaro sy hamelona ny zanany, mitady trano fonenana sy asa, ho an'ireo rehetra hiharan'ny herisetra ao an-tokantranony, herisetra ara-pananahana sy fahasembanana na ireo rehetra miaina ao anatin'ny ady mahatsiravina sy ny fanavahana ara-pinoana, na inona na inona.
mahatsirao koa aho ireo vehivavy rehetra sambatra eo anilan'ny lehilahy (na vehivavy), tiany sy tia azy, ireo izay mahita fiadanana amin'ny fiainana maha vehivavy azy, ny maha reny azy, ny maha vady azy, ny maha olon-tiana azy, ho an'ireo vehivavy rehetra mahatsiaro sambatra fa nateraka ho vehivavy.
Ny omombelona misaina rehetra dia maniry hanana olona eo akaikiny, olona mitovy aminy, izany hoe afaka sy mivelatra.
Mahagaga ihany ity fety ity, satria mijanona ho vehivavy foana isika isan'andro mandavan-taona…
Any La Réunion dia nandefa sary nankalazana ity andro ity tany St. Paul i Noemie tao amin'ny TiBazar [Fr] .
Ary tany Maroc dia nanome haja manokana ny vehivavy tamin'ny alalan'ny tononkalo ny citoyenhmida , tononkalo izay heveriny fa tsy feno raha tsy eo ny “Black woman,” (vehivavy mainty) nosoratan'ilay mpanoratra Senegale, Léopold Sédar Senghor:
Vehivavy mihanjaka, vehivavy mainty
Mitafy ny lokon'ny fiainana,
miaraka amin'ny endrikao hatsarana!
Tao ambany elatrao no nitomboako;
ny fahalemen'ny tananao no nandrakotra ny masoko.
Ary ankehitriny, ny hafanan'ny tara-masoandro
eto an'ivon-dohataona, rehefa mitatao vovonana,
Avy manantona anao aho, ry Tany Nantenaiko,
Mamely hatrany anaty fo ny fahatsaranao
tahaka ny fanindron'ny voromahery.
Voankazo masaka eny an-tsaha, fahatsaran'ny divay mainty
miantsa fahatsarana eo am-bavako
Ahitra manazava ny fara-tazana,
ahitra mamolivoly entin-divotra malefaka
misafo avy antsinanana
Zava-maneno voasokitra, mibitsika avy lavitra,
ambany rantsan'ny mpandresy
Ny feonao iva no bitsiky ny fanahy
ho an'ny olon-tiana.
Vehivavy mihanjaka,vehivavy mainty
Diloilo voakobana, manaisotra ny fanaintan'ny
lamosin'ny mpihazakazaka , ny lamosin'ny mpanjakan'i Mali
Gazela mitoetra irery any am-paradisa, vatosoa no kintana manjelatra anatin'ny alina eny an-koditrao
Fahafinaretan'ny fisainako, diamondra manjelatra mena
mipetaka amin'ny hoditrao mando
Tao ambany aloky ny volonao, voazava ny fisiako
Noho ireo tara-masoandro avy amin'ny masonao.
Vehivavy mihanjaka, vehivavy mainty,
Mihira ny hakantonao mandalo, ny endrikao banjiniko mandrakizay,
Mandra-pihavin'ny vintana misompatra
manova anao hovovoka hamahana ny fakan'ny fiainana.